Ụbọchị My Pet » 5 Akpa Taboos I Kwesịrị Ịhapụ na Gbaa Ọsọ Site
Gịnị mere otu onye na-imikpu site mkpakọrịta nwoke na nwaanyị taboos? Ọtụtụ mgbe a taboos kwụsị ndị mmadụ si na-abịa gafee na ezi onye ahụ n'oge kwesịrị ekwesị; dị otú ahụ na-amụba ọnụego nke gbawara n'etiti gbasie na alụkwaghịm, nke a bụ nanị unpardonable. Ya mere, ihe mbụ ị ga-eme tupu na-aga si na a ụbọchị na-agbasa ndị a taboos. Lee ụfọdụ mkpakọrịta nwoke na nwaanyị taboos ị kwesịrị ị na tufuo.
1 Oh! Na nwoke ahụ na anya ọma, ma ọtụtụ ihe mkpumkpu karịa m.
Gịnị bụ n'ịdị elu? Olee otú a mmekọrịta na-ezighị ezi dị nnọọ n'ihi na nwoke bụ mkpumkpu karịa nwaanyị? Kama ịlele na mmadụ si dị elu, ị kwesịrị ị na-akwụ ụgwọ ndị ọzọ anya ka ike ya, onye, agụmakwụkwọ na ama. N'ezie, i nwere ike na-aga n'ihi na ihe agbasi àgwà ndị dị ka ezi àgwà na vitality (ee maka ndị anụ ntị ugboro), ma na-eme mkpebi ndị dabeere na a nwoke elu abụghị nanị kwesịrị ya.
2 M na-ekwesịghị ịbụ onye na-ebute ụzọ.
Nke a bụ otu mkpakọrịta nwoke na nwaanyị taboo na-egbochi ọbụna ụfọdụ nke smartest na coolest inyom. Nke a taboo n'ezie ị ga akụkọ ifo na-atụ aro ndị inyom ahọrọ akpa obi ike, ike bụ ndị-aga na-getters na ndị ikom rafuo ọzọ mfe site na ndị inyom na-eme ka ha chee na ha siri ike, obi ike na-aga-na-. Nke a bụ nnọọ ihe efu.
Ọ bụ nnọọ ihe ọjọọ na ya iche na mmadụ niile bụ otu. Enwere ọtụtụ, na ee ọtụtụ ndị ruru oké egwu nke ojuju mgbe ịjụ inyom; inyom mgbe nile kwesịrị ime ihe mbụ ụzọ ka ọ na-arịọ ha ka ha si ma ọ bụ mmekọahụ. Nke a na-, Otú ọ dị, ọlị akọwaputa eziokwu na ndị ikom dị otú nwere ike ịbụ oké ndụ nwunye ma ọ bụ (ma ọ bụrụ na ị na-agaghị achọ na anya) mkpakọrịta nwoke na nwaanyị bụ di na nwunye.
3 Ọ na-arịọ m ka m kewaa ụgwọ; ọ ga-adị ùgwù n'ihi na ụmụ nwaanyị.
Ọ bụchaghị; ọzọ karịa efu ohere ngosi ya n'anya onwe, site chọrọ kewaa ụgwọ ndị ikom na-agwụ elu ndiwụt ihe intrinsic aka ntagide. Nọrọ n'ebe ikom dị otú ahụ.
4 Ọ bụ naanị anyị mbụ ụbọchị; otú m nwere ike na-enwe mmekọahụ?
Women esifịna site na nke a jogburu onwe mkpakọrịta nwoke na nwaanyị taboo iche na ndị ikom nwere ike mgbe na-akwanyere ndị inyom bụ ndị na-akpachi anya na nke mbụ n'abalị ma si otú ada na ịhụnanya na ha.
Ndị inyom ga-echeta na oké mmekọrịta bụ mgbe banyere ntabi ebua ma ọ bụ onwu. Dị nnọọ n'ihi na ị nwere mmekọahụ na mbụ ụbọchị, ị na-adịghị na-mfe. Mmekọahụ na mbụ ụbọchị ahụ pụrụ ịbụ ihe na-egosi nke eziokwu na gị na ọhụrụ mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ma ọ bụ nwunye na-gelling n'ezie ọma ọnụ.
5 Nke ahụ Ihọd bụ mma na-adọrọ adọrọ, ma ọ bụ ihe m otu.
The taboo na-ekwu na ihunanya mmekọrịta n'etiti ibe mgbe ndị adịteghị ruru ihe dị ka ekworo, ndọpụ uche, imelara na asịrị. Ọtụtụ ndị na-ihere pụọ n'ebe mmekọrịta dị otú ahụ ka ha na-atụ egwu na a gbasaa nwere ike ime ka ndụ na-arụ ọrụ nnọọ anuri maka ha.
Bibie a taboo ka anya dị ka o kwere omume dị ka ị pụrụ ịhụ na a zuru okè ndụ ibe gị na-arụkọ ọrụ. Ihe kacha mma banyere mmekọrịta dị otú ahụ bụ na unu abụọ ga-esi na-emefu a otutu oge ọ bụla ọzọ na; ị nwere ike ịga njem ọnụ na site na ọrụ, i nwere ike nri gị ọnụ, ibuana ke ụlọ ọrụ nnọkọ na na. Dị nnọọ jide n'aka na onwe gị ihe dị iche (mgbe e nwere ihe ọ bụla) adịghị emetụta ọrụ.
Ekwela ka ndị a taboos na-egwu nnukwu ọrụ mgbe na-eme mkpebi na onye. Ime otú ahụ ga-eme ka ị na-eche ihe mkpụrụ obi gị na onye òtù ọlụlụ.